नेपाल, पात्र र भारत- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
नेपाल, पात्र र भारत
फाल्गुन १०, २०७१ अभि सुवेदी
दक्षिण एसियामा कस्ता नेपाली व्यक्ति र पात्र परिचित छन् भन्ने धेरै छलफल नभएको विषय रहेछ ।
विषय निकै ठूलो भएकोले म एउटा सानो लेखमा धेरै भन्न सक्ने धृष्टता गर्न चाहन्न । आफ्ना एकाध अनुभवहरू र विचारहरू राख्न यो विषय लेखेको छु । भारतमा साधारण रूपमा नेपालका केही पात्रहरूबारे चर्चा गरिन्छ । ती पात्रहरू राजनीतिमा धेरै छन् । साहित्यमा थोरैमात्र परिचित छन् । मेरा अनुभवहरू साहित्यसँग जोडिएका छन् । त्यसमा पनि सेमिनारमा प्रस्तुत हुने पत्रहरू र अरु अनुभवमा आधारित छन् ।
आग्रामा फेबु्रअरी दोस्रो हप्तामा भएका साहित्यिक कार्यपत्रहरूको प्रस्तुतिलाई लिएर कुरा आरम्भ गर्छु । नेपालबाट युवा विद्वानहरू केशव सिग्देल र मेघराज अधिकारीले सीमान्त जीवन र हिंसामाथि कार्यपत्र लेखे । तिनीहरूले सेमिनारको विषयमाथि निकै जटिल छलफलहरू राखे । केशवले भारतीय र नेपाली साहित्यिक पाठ र संस्मरणको आधारमा इतिहासमा सीमान्त हिंसाका चरित्र र परिणामका कुरा राखे । मेघराजले नगर र निर्मित संस्कृतिभित्रका रचनात्मक चरित्रका चर्चा गर्दै निर्माण र प्रयोगका नेपाली र भारतीय उदाहरण राखे । त्यसै सिलसिलामा मैले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेँ । मेरो मूल खोजी यस भेगमा खासगरी भारतमा आफ्नो व्यक्तित्व बनाएर प्रस्तुत भएका नेपाली पात्रहरूको विषयमा थियो । प्राध्यापक र विद्वान आलोक भल्लाले मलाई त्यहाँ भनेअनुसार अहिले खुलेको दिल्लीमा रहेको सार्क विश्वविद्यालयको अवधारणासँग पनि यो विषय जोडिएको छ । उनी अहिले दक्षिण एसियाली अध्ययनको सिलसिलामा एकअर्कालाई प्रभावित पार्ने पात्र र विषयको खोजीमा भएकोले मैले प्रस्तुत गरेको विषय उनलाई चाख लाग्यो । मैले यस विषयमा काम गर्नुपर्ने तिनको राय थियो । आलोक भल्लासँगै अर्का भारतीय विद्वान आशिष नन्दी, उनकी श्रीमती र महात्मा गान्धीका नाति राजमोहन गान्धीले पनि भाग लिएको त्यो सम्मेलनमा यो विषय उठ्नु महत्त्वपूर्ण थियो ।
मैले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आप्रवासनको अवस्थामा लेखिएको साहित्य र जर्मन दार्शनिक र विद्वान एरिख अर्बाखले दोस्रो विश्वयुद्धताका टर्कीको इस्तनबुल विश्वविद्यालयमा पढाउँदा लेखेको विश्वप्रसिद्ध समालोचनात्मक कृति माइमेसिस : पश्चिमी साहित्यमा यथार्थको प्रतिपादन भन्ने कृतिको तुलनात्मक अध्ययन गरेँ । यस सिलसिलामा मैले एउटा अलिक जटिल विषयमाथि छलफल गरें । मेरो तर्क थियो, आप्रवासन वा निर्वासनमा लेखिने साहित्यका दुईवटा चरित्र हुन्छन् । एक प्रकारको साहित्य देशबाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यताको अवस्थामा लेखिन्छ । त्यो बाहिर लाग्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रवासीको साहित्य हो । त्यो डायस्पोरा-साहित्य होइन । देश बाहिर जानुपरेको अवस्थाको चोट हुन्छ, त्यसमा । कित देश विखण्डन भएको बेला लेखिन्छ, त्यस्तो साहित्य, कि आफै प्रवास लाग्नुपरेका अनुभवले लेखिन्छ । भारत र पाकिस्तान दुई राज्य विभाजन भएको बेला धेरै मानिसका, आशिष नन्दीको किताबको शीर्षकमा भनेजस्तो सहरका भ्रमित यात्रा भए । त्यस्तो अवस्थामा लेखिएको सदात मन्टोको कथा साहित्यले पनि आफ्नो भूभागबाट बाहिरिनुपरेको अवस्थाको चित्रण गर्छन् ।
अर्को प्रकारको आप्रवासनको साहित्य पनि हुन्छ । त्यो देशभित्रै आरामले स्थायी भावनामा बसेको अवस्थामा लेखिँदैन । त्यसमा देश वा भूमि गुमाउनुपरेको सोझो पीडा पनि लेखिँदैन । त्यो शान्त, चुपचाप र गम्भीर साहित्य हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाको लेखकले भने आप्रवासन भोग्नुपरेको कुरा विलौना नगरी, आक्रोश नपोखी अर्को ढङ्गले लेख्छ । त्यस्तो साहित्यमा लेख्नेले भोगेको अवस्थाको कुरा सोझै आउँदैन । अर्बाखले जर्मन छोड्नुपरेको पीडा उनको माइमेसिसमा लेखेनन् । तिनले पश्चिमी युरोपको साहित्यका प्रसिद्ध कृतिमा यथार्थको चित्रण कसरी भएको छ भनेर लेखे ।
उता जर्मनीबाट आफ्ना मानिस ग्यास च्याम्बरमा हालेर मारिएका, विस्थापित भएका समाचार उनलाई आइरहे होला । जति-जति पीडा भयो, त्यति-त्यति अर्बाख विगतका लेखकका उपलब्धि र सिर्जनशील समालोचनाभित्र पसे । उनले गियाम्बा टिस्टा भिकोले सत्रौं-अठारौं शताब्दीमा भनेको कुराले काम गरे । भिको भन्छन्, पहिलेको अवस्थामा कल्पना गर्ने शक्ति उत्ताल र उनको भाषामा बार्बारिक थियो । त्यसमा कल्पनाको सामथ्र्य बलियो हुन्छ । पछिका साहित्यमा त्यो कमजोर वा टाढा हुँदै गएको देखिन्छ ।
यस्तो साहित्यिक लेखन अर्बाखको एउटा अर्को अवतार थियो । बँाचेका रहेछन् भने कुनै दिन साथीभाइ र विद्यार्थीले मेरो कृति पढ्लान् भन्ने उनको आशा थियो । उनको निम्ति पढ्ने सामग्री थिएन । त्यसैले उनले सबै समीक्षा आफ्नै ज्ञान र कल्पनाले लेखे । पहिलेका लेखक र मिथकहरूबाट शक्ति लिन सकिन्छ र अहिलेलाई हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि माने । त्यस्तै कुरा उनले पनि मानेका लिओन् ट्राटस्कीले पनि भने । तिनले लेखकहरूलाई नयाँ जोशमा पहिलेका लेखनको पठनपाठन र प्रेरणा लिने कर्म चटक्कै छाड्न नहुने बताए, किनकि त्यसो गर्दा लेखनमा दम सकिन्छ । भुइँफुट्टा हुने डर हुन्छ ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको लेखनमा युद्ध एउटा विषय भएको छ । उनले धेरै कृतिहरू आफ्नै देशभित्र भए पनि लामो कारागारमा लेख्ने र कल्पना गर्ने अवस्थामा तयार गरेको अनि पिता कृष्णप्रसादका पालादेखि नै भारत निर्वासनमा हुर्किनुपरेको संस्मरणमा लेखेको हुनाले मैले उनका लेखनमा आप्रवासन अवस्थाको चित्रण अर्बाखको भन्दा अलिक वाचाल तर शान्त र स्थितप्रज्ञ अवस्थाको हो भनेर लेखेंँ । तर अर्बाखले युद्धको विभीषिकालाई अपरोक्ष ढङ्गको अर्को रूपमा राखे । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले युद्धको विषय आफ्ना उपन्यास, डायरी र संस्मरणमा राखे । उनले मेरो साहित्य र राजनीति अलग हो भनेको कुरा मैले नमानेर लामा लेख लेखेको कारण त्यही हो । लामो हुने भएकोले यहाँ लेख्न सम्भव भएन । मैले पहिलो त्यस्तो व्यक्ति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विषयमा राखेका तर्क राजमोहन गान्धीलाई र विद्वान आलोक भल्लालाई मनपरेछन् । उनीहरूले मलाई आफ्ना तर्क सुनाए । मलाई लाग्यो, भारतमा नेपालका कस्ता राजनीतिक र साहित्यिक पात्र परिचित छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पहिलो आफ्नै हातले लेखेको आत्मसंस्मरणबाट बुझ्दा उनी भारतमा परिचित पहिलो र बलियो नेपाली पात्र थिए । कोइराला भारतीय मुक्ति सङ्ग्रामदेखि नै लडेका मानिस थिए । उनको महात्मा गान्धी र अरु भारतीय नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । त्यसैले राणाहरूले जेल यातना दिएको बेला महात्मा गान्धीले उनको मुक्तिको निम्ति सोझै यहाँका शासकलाई दबाब दिए । विश्वेश्वरप्रसादको व्यक्ति रचना वा पर्सोना विस्तृत चरित्रको थियो । अहिले सार्क विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया अध्ययनको सामग्रीको निम्ति नेपालका पात्रको खोजी हुने विषयलाई लिएर कुरा हुँदा आशिष नन्दी र आलोक भल्लालाई यताका पात्रहरूको विषयमा निकै कुरा थाहा छ भन्ने देखियो । राजमोहन गान्धीले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकै विषयमा बढी कुरा गरे । नेपालका अरु राजनेतामा प्रचण्डको नाम उनीहरू र अरुले पनि उच्चारण गर्छन् । तर अहिलेको अवस्थाले उनीहरू अन्योलमा छन् । नेपाली राजनेताका विशेष व्यक्ति विम्ब उनीहरूसँग छैनन् । यताबाट त्यस्ता विम्ब बनिने क्रम अहिले टक्कै रोकिएको देखियो ।
साहित्यमा भने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नाम नै चर्चामा रहे पनि उनका कृतिका एकाध खराब अनुवादबाहेक उनीहरूसँग अरु खासै केही छैनन् । मेरो प्रस्तुतिमा थाहा पाएपछि कोइरालाको आत्मसंस्मरणको अङ्ग्रेजी अनुवाद पठाइदिनु भनेका छन्, भल्लाले । नेपाली साहित्यका अनुवादले भारतमा खासै पात्रहरू परिचित बनाएका छैनन् । नेपालबाट गएका कविहरूलाई उनीहरू मनपराउँछन् । तीनजना निकै युवक कविहरू पुगेका रहेछन् । निर्मल थापा कथाकार, कवि र प्रकाशक हुन् । धीरज राई, अर्जुन ढुङ्गाना र दीपकसम्चु राई युवक कवि रहेछन् । मैले राई युवकहरूका कविता अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिदिएँ । भुपेन ब्याकुल, गीता कार्की र सन्ध्या पहाडीले कविता पढे । गीता, सन्ध्या र सुमन पोखरेलका कविता पनि अनुवाद गरेको थिएँ । मैले पाठ गरें । सुमन पोखरेललाई अघिल्लो दिन सार्क लिटरेरी एवार्ड प्राप्त भएको थियो । साहित्यकारहरू अहिले आयोजकहरूसँग सोझै सम्पर्क स्थापित गरेर जानथालेका रहेछन् । खुसी लाग्यो ।
सन् २०१२ मा शारदा शर्मा र मलाई भारतीय अकादमीको जयपुर सम्मेलनको निम्तो आयो । कार्यपत्र प्रस्तुति गरेपछि भारतका विद्वान र छुच्चा समीक्षक हरिश त्रिवेदीले मलाई ठाडा प्रश्नले हाने । मैले फर्काएँ । रमाइलो भयो । तर मैले एउटा कुरा थाहा पाएँ । त्यहाँ आएका उनीहरू नेपाली साहित्यकारमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र इन्द्र राईका नाममात्र चिन्दारहेछन् । अङ्ग्रेजीका प्राध्यापक ती हरिश त्रिवेदीले इन्द्र राईमाथि लेखेका थेसिस निर्देशन गरेका रहेछन् ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले युद्धका दुई अलग कालका चित्रण गरेका छन् । मोदिआइनमा नारीहरू डिलमाथि चढेर महाभारत युद्धको भयावह आरम्भ हेर्छन् । हिटलर र यहुदीमा युद्धको बीसौं शताब्दीको विभीषिकाको चित्र छ । अर्बाखले युरोपको साहित्यमा विगतदेखिको यथार्थ हेरे । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले यी कृतिमा दक्षिण एसियाली मिथकदेखि अहिलेसम्मको युद्धका अतिरञ्जित काव्यिक यथार्थको चित्रण गरे । दक्षिण एसियालाई नेपाली पात्र चाहिन्छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७१ ०८:१८
परिचय खोसेको कसले ?
फाल्गुन ११, २०७१ सौरभ
काठमाडौ — बाबुको नागरिकता बनाएकाहरूचाहिँ बडो ठालु पल्टिएर एक मधेसका कुरा गरिरहेका देखिएको छ ।
तराईबाट आयो तरैया, बोकेर टोकरी
सोह्र वर्षे हलहले जोवन, यो रानीपोखरी
१९६० सालमा एउटी विवाहिता तर साक्षर १६ वर्षे किशोरीले कागजमा लेखेर किनारमा छोडेको यो पंक्ति र रानीपोखरीमा हामफालेको त्यो घटना काठमाडौंका निम्ति ठूलो सनसनी भएको थियो भन्ने कुरा बज्यैबाट आमा हुँदै यो पंक्तिकारले सुनेको हो । तर त्यतिबेला पनि तराई शब्द लेखिनुको मर्म के थियो ? कै विस्तार हो, यो लेख ।
'मध्यदेश' भन्यो मनुस्मृतिले त्यो इलाकालाई जसको पूर्वी सीमा प्रयागतीर्थ हो र पश्चिमी सीमा विशनश अर्थात सरस्वती नदी लुप्त भएको ठाउँ । रामको कालमा यसलाई अयोध्या भनिन्थ्यो र मुगल कालमा अवध भनियो । अवधको राजधानीलाई अहिले भारतमा लखनऊ भनिन्छ ।
यहींको यमुना र गंगाको संगम प्रयागतीर्थ (अहिलेको अलाहवाद) । अनेक तीर्थहरूमा श्रेष्ठ मानिन्थ्यो, नेपालका पहाडवासीहरूका निम्ति पनि । बाजुराको कोल्टीबाट सोझै दक्षिण पर्छ, प्रयागतीर्थ । त्यस प्राचीन वैष्णव तीर्थको प्रभावले नै हो गुल्मी, अर्घाखाँचीमा वैष्णव धार बलियो छ । उदाहरण रिडी ऋषिकेश हो नै । यसैले मध्यदेश लाग्नुको अर्थ दक्षिणतर्फ लाग्नु भन्ने हुन्थ्यो सुरुतिर भने पछिपछि दक्षिण लाग्नु नै मध्यदेश हुनगयो । यो मीनभवन नामको घरभित्र पस्न नहिँडेको मानिसले पनि कुनै बेला बानेश्वर-तीनकुनेको भागलाई मीनभवन भनेजस्तै हो । तर त्यस अवधकै उत्तरमा रहेका अनेक जिल्लाहरूले पनि नेपाललाई वाषिर्क सिर्तो बुझाउँछन् (हेमिल्टन सन् १८२८) भन्ने तथ्यले न औपचारिक रूपमा नेपालको सिमानाभित्र मधेस थियो, न नेपालको सीमा अहिलेजत्ति मिचिएको नै थियो भन्ने स्पष्ट छ ।
तिरहुत र तराई
तिरहुत विहारको उत्तर पश्चिमी कुनामा पर्ने आठ हजार वर्ग किलोमिटरको इलाका हो । हाम्रो द्यौलागिरि अञ्चलभन्दा केही सानो । यसको उत्तरमा नेपालको सप्तरी जिल्लाको सीमाको जंगली भाग पर्छ र दक्षिणमा गंगा नदी छ । पूर्वमा पूणिर्याँ र सरौं भन्ने ठाउँ पर्छ । प्राचीन तिरभुक्तिको अपभ्रंश हो, तिरहुत । तर तिरभुक्ति आफैं त्रि अर्थात गंगा, गण्डक र कौशिकी बीचको भुक्ति अर्थात भोगिएको, खेती गरिएको जमिनको अपभ्रंश हो । जसमा सन् १२३७ मा तोर्गा खाँले हमला गरी केही रकम लिई छोडिदिएको थियो, तर स्वाधीनता भने सन् १३२० तिर दिल्लीका शासक अलाउद्दिन खिल्जीको हातबाट समाप्त नै हुनगयो । गण्डक गंगामा सोनेपत भन्ने ठाउँमा र कौशिकी कर्सेला भन्ने ठाउँमा मिल्छन् । प्रयागतीर्थ, कर्सेला, सोनेपत सबै २५ डिग्री उत्तर अक्षांशमा छन् र नेपालको सीमा न्युनतम २६ डिग्रीबाट सुरु हुन्छ ।
त्यसैले वि.सं. १८२६ मा उपत्यका लिने बित्तिकै तराईवासीहरूको बाहुल्य रहेको जयप्रकाश मल्लको तिरहुतिया गणलाई पृथ्वीनारायण शाहले भंग गरे भन्ने डिफाइनिङ मैथिल आइडिनटिटी-क्लेयर बर्केट लेखाइ हावादारी अलाप हो । गण भएको भए मल्लले गढवाली नगरकोटी किन झिकाउनुपर्थ्यो ? नेपालमा औपचारिक सैनिक गण स्थापना भएको सम्भवतः वि.सं. १८०१ मा मात्रै हो । त्यसमाथि ब्राह्मणले वैद्य विद्यामा दख्खल राखेमा थर मिश्र हुन्छ । तन्त्र विद्यामा दख्खल राखेमा थर झा हुन्छ । दुवै थर उत्पत्तिको केन्द्र त्रिभुक्तिको मौवा हो । काठमाडौंमा तिनीहरूलाई 'तेरौँते' भन्ने चलन छ, अरुलाई होइन । यद्यपि काठमाडौंमा बनारसी र पञ्जाबी मिश्रहरू पनि छन् । अर्थात् जयप्रकाश मल्लको सैन्यगण मिश्र र झा मात्रको थियो भन्ने निचोड निक्लन्छ जुन हास्यास्पद निर्क्योल हुन्छ, बेर्केटका कुरामा जाने हो भने ।) 'तरियानीको अर्थ समुद्री सतहबाट कम उचाइको धापिलो जमिन हो, जसमा डुंगा चलाउन सकिन्छ अर्थात डुंगाहरूको देश । यसको मूल फारसी हो' भन्ने एक फिरङ्गी (वाल्टर) को दाबी छ । जुन अशुद्ध हो । संस्कृतको तरणीको प्रचलित अर्थ कमल हो । तर तरणीको मूल अर्थ पानीमा तैरिने कुनै पनि वस्तु हो, पत्करदेखि डुंगासम्म । यसैले तरणी नै तरियानीमा रूपान्तरण हुँदै तराई हुनपुग्छ । 'जुन शब्दलाई नेपालीहरूले आफ्नो मैदानी भूभागका निम्ति प्रयोग गर्छन्' (हेमिल्टन सन् १८२८) यही कारण हो, कर्कपेटि्रक लगायत फिरङ्गीहरूले त्यस दक्षिणी मैदानका निम्ति न मधेस शब्द प्रयोग गरे न तिरभुक्ति, बरु प्रयोग गरे तरियानी ।
'अकबरका समयमा तराईमा भारी मात्रामा खेती हुन्थ्यो, नेपालीहरूले त्यसलाई जनसंख्यारहित बनाइदिए' भन्ने लेखाइ अर्को अलाप हो -मिसनरी स्केचेज इन नर्थ इन्डिया-बेटवेक्थ ।
किनभने अकबरले एक लाख आँपका बोट रोपेर दरभंगामा लालबाग अमराइ खडा गरेका थिए, नेपालको लालझाडी (चारकोसे) बाट लिइएको नाम भएकाले । बरु 'जंगलभित्र ससाना राजाहरू थिए, तर ती बाहिरी हस्तक्षेपको कारणले घना जंगल पालेर बसेका थिए, नेपालीहरूले वन फँडानी गर्न सुरु गरे' भन्ने अर्को लेखाइ (वाल्टर) सही हो ।
नभन्दै सातौं शताब्दीका दुसाध राजा भनिने सलहेसको केन्द्र अहिले पनि लहानबाट केही मिनेट पर जंगलकै अवस्थामा छ ।
११ औं शताब्दीको भनिने सिम्रौनगढको नामले नै बुझाउँछ, सिमलको जंगल हो । १४ औं शताब्दीको भनिने पुरादित्यको बनौली नामले नै स्पष्ट गर्छ, त्यो जंगलभित्रको बस्ती हो । यद्यपि विद्यापति मैथिलले आश्रय लिएका भनिने यो बनौली कुनचाहिँ हो, स्पष्ट छैन । किनभने त्यहाँ तीनवटा बनौली छन् । लुम्बिनी जंगलभित्र पुरिइसकेको थियो भन्ने अभिव्यक्ति १९ औं शताब्दीका धर्मपालले नै दिए । 'न्यग्रोध आराम' र 'पिप्पली वन' नामहरूले वरपीपल जाति -फाइकसिस स्पेसिज) को जंगल थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ नै । विराट भनिएको ग्रोगहाको नामबाट बुझिन्छ, त्यो गोहीले कुनै बेला भरिएको इलाका हो । किनभने स्थानीय थारु भाषामा मोरङको अर्थ हो, धापिलो जमिन । जनकपुर नै जंगलभित्रको सानो बस्ती थियो, वृषभानुले मन्दिर बनाउने सुरसार गर्दा । यसैले राज्य नाम लिएका तर उपत्यकाका ३ थकुजुजुसहित बाइसे र चौबिसेजस्तो राजनीतिशास्त्रको भाषामा राज्य प्रणालीयुक्त स्वरूप नभएका बस्तीहरू मात्र भएको इलाका थियो तराई ।
पहिलो आप्रवासनबारे पादरी लुडविग स्टिलरले लेखे (सन् १७६९-७० को बंगाल भोखमरीका बेला प्रशस्त बंगाली र विहारीहरू नेपाल आए (साइलेन्ट क्राई) ।
यो भुखमरीमाथिका पेन्टिङहरूले ढाकाका जैनुल आवेद्दिनलाई विश्वविख्यात बनाएको थियो । किनभने बंगालमा मानिसको लासहरूको सद्गति गर्न नभ्याएर रेलको बोगीमा गिद्धहरू ओसारेर सहरमा छोड्नुपरेको थियो । दोस्रो उल्लेखनीय आप्रवासनका उदाहरण दिएका छन्, नेपालका निम्ति तत्कालीन बि्रटिस भारतीय दूत कर्णेल रामशेले यसरी -१८६६/६७ को भयानक भोखमरीको बेला विहारबाट प्रशस्तै मानिस नेपालमा चलाइएको सदावर्त खान पसे । तिनले खानका निम्ति आफ्ना सन्तान पनि बेचे । (ब्रिटिस सरकारलाई लेखेको पत्र)
तेस्रो आप्रवासन जुद्धशमशेर राणा सन् १९३३ मा प्रधानमन्त्री भएपछि सुरु भयो । जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीदेखि जुट मिलसम्म तराईमा खुले । त्यसले सीपयुक्त मजदुर, व्यवस्थापक, लगानीकर्ताहरू यावत् मात्रामा ओसार्‍यो । तिनलाई चाहिने सामान आपूर्तिकर्ताहरू पनि पसल लिएर आए ।
कोइरी र कवारीहरूले तरकारी खेती सुरु गरे तराईमा । कृषक वर्ग र व्यापारिक वर्ग दुवैको बगाल यही बेला आयो । यद्यपि सन् १८८४ पछि वीरशमशेर राणाले जलेश्वर लगायत उनकै नाममा रहेको तर अहिले भारतमा परेको वीरपुर लगायत करिब दर्जन स्थानमा खोलेका पृथ्वीवीर अस्पतालहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष सीप भएकाहरूलाई पारिबाट निम्त्याउन सुरु गरिसकेको थियो । चौथो आप्रवासनबारे एन्दि्रया सभादा लेख्छिन् -सन् १९९१ मा पनि विहार र अन्य छिमेकी इलाकाबाट समेत धेरै भारतीयहरू नेपाल पसे । (नेपाल अ कन्ट्री स्टडी)
पाँचौं आप्रवासन वि.सं. २०६३ को परिवर्तनपछि आठ लाखलाई नागरिकता दिने नाममा झन्डै चालिस लाखलाई नागरिकता बाँडियो । यसैमाथि संयुक्त जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीहरूले मुद्दा उठाइरहेकै छन् ।
तर आसामबाट नेपालीहरू निकालिँदाको विवादबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले भने, १९५० भन्दा यता पसेकाहरूलाई भारतीय नागरिक मान्न सकिन्न । त्यसो हुँदाहुँदै पनि २०२७ सालमा आफूलेे र २०२८ सालमा तैपनि सन् १९५० उताकाले मात्र राजनीतिक माग राख्न पाउनुपर्छ, कसैले भनिरहेको छैन ।
रोटी, बेटीको सम्बन्ध
वर्षेनि डोमेनिकी गणतन्त्रका पचासौं हजार नागरिकहरू हेइटीमा मजदुरी गर्न पुग्छन् । पचास हजारजति नै भियतनामी महिलाहरूले चीनसँगको सीमा नाघ्छन् । सीमा इलाकाका नागरिकहरूबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध लेटिन अमेरिका, अपि|mका, एसिया र युरोपमा व्यापक छ । तर कसैका पनि सीमा अनियन्त्रित -इररेगुलेटेड) हुँदैनन्, छैनन्, नेपालको बाहेक ।
यो थोपरिएको बाध्यता हो, रोटीबेटीको सम्बन्ध । र यही कथित रोटीबेटीको सम्बन्ध हो, जसले जहिले आएर बसेको भए पनि तराईमा बसोबास गरिरहेका तर मूलधारमा परिएन भनेर चिन्तित, आक्रोशित र पीडित तराईवासी नेपालीहरूको पहिचान खोसिरहेको छ । कसरी भने डेढ लाख वर्ग किलोमिटरको सानो देशले दिने राजकीय अवसरहरू निश्चित छ, अत्यन्तै थोरै हुन्छन् । त्यो सीमापारिको लागिचाहिँ नजाओस् भनेर नियन्त्रण गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । तर को यताको हो ? को उताको हो ? चिन्नै नसकिने स्थिति खडा भएको छ, खुला सिमानाले । अनि जब गलत पात्र ठानेर अवसरबाट रोक्न खोजिन्छ, त्यो नेपालभित्रकै पर्छ । त्यतिबेला आक्रोशको ज्वाला उठ्नु स्वाभाविक हो । अर्थात् सीमा नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने माग पहाडवासीले भन्दा तराईवासीले गर्नु जरुरी थियो र छ, नकि एक मधेसको माग । तर सीमा नियन्त्रित गर्नु भनेको तराईवासीलाई अँचेट्नु हो भन्ने भ्रम एक किसिमका मानिसमा छ । जसलाई रैथाने तराईवासीहरू बुझ्दैनन् वा बुझ्न चाहँदैनन् । तिनको राष्ट्रिय पहिचानलाई जो यो रोटीबेटीको सम्बन्धले बिथोलेको छ अर्थात् उनीहरूको पहिचान बन्न नदिएको त्यही देशले हो, जो सबैभन्दा बढी हिमायती भएको दाबी गर्छ ।
काठमाडौंमा ठानिन्छ, तराईका केही र भारतबाट धेरै मात्रामा तराईलाई एक प्रदेश बनाउने दबाब छ । यथार्थचाहिँ के हो भने त्योभन्दा धेरै बढी पश्चिमा दबाब छ । एकातिर चाल्र्स र्‍याम्बलजस्ताहरू बृहत भोट -तिब्बत) भित्र नेपाली हिमाली जातिहरू किन बाँधिदैनन् ? भनेर खुलै गुनासो गर्छन् र अर्कोतिर जोन हेल्पटनहरू तराईमा थारु, धिमाल, राजवंशी आदि जातजाति छन् र मैथिली, अवधी र भोजपुरी भाषीहरू छन् भन्ने कुरा जानाजान बिर्सेर त्यसलाई हिन्दीभाषी बनाउनुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । (सम्पादन गेल्नर, युहाना, जारेनका र हेल्पटन)
अर्थात राज्य पुनसर्ंरचनाको धर्को उत्तर र दक्षिण तानिनु हुँदैन भन्नेमा भारतभन्दा धेरै चासो पश्चिमको छ । निदाएको बहाना गर्नु त नेपाली धर्म नै हो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७१ ०८:१४